सत्ता गठबन्धनमा बाँडफाँड, कुन दलले कहाँ उठाउने भयो साझा उम्मेदवार ? – Himshikharnews.com
सत्ता गठबन्धनमा बाँडफाँड, कुन दलले कहाँ उठाउने भयो साझा उम्मेदवार ?
७ बैशाख २०७९, बुधबार १२:५७
सत्ता गठबन्धनबीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा लगभग बाँडफाँड मिलेको छ । मङ्गलबार दिनभर छलफल पछि राति १० बाट विहान २ बजेसम्म बसेको बैठक लगभग सहमति नजिक पुगेको हो ।
सहमति अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरमा नेपाली काँग्रेसबाट मेयर, भरतपुरमा माओवादी, पोखरामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र वीरगञ्जमा जनता समाजवादी पार्टीले मेयरको साझा उम्मेदवार बनाउने छन् । उपमेयरमा काठमाडौंमा नेकपा एस, ललितपुरमा माओवादी, विराटनगरमा जसपा र वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरामा काँग्रेसका साझा उम्मेदवार हुनेछन् ।
उपमहानगरपालिकाहरुमा धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर र धनगढीमा काँग्रेस, जितपुर सिमरा र घोराहीबाट माओवादी, हेटौंडामा नेकपा एसले मेयरको साझा उम्मेदवार उठाउने सहमति बनेको छ । नेपालगञ्जमा जसपाको दाबी छ । जनकपुरमा पनि कुरा मिल्न सकेको छैन ।
जितपुर सिमरा, हेटौंडा, घोराहीमा काँग्रेसबाट उपमेयर, धरान र धनगढीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमेयर, इटहरी, बुटबल र तुलसीपुरबाट नेकपा एसका उपमेयर र कलैयामा जसपाका उपमेयरका साझा उम्मेदवार हुनेछन् ।
२०७४ मा उपमहानगरपालिकाहरुमा धरान, इटहरी, जितपुर सिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुरबाट एमालेले मेयर र उपमेयर दुवै जितेको थियो । जनकपुरमा तत्कालीन तमलोपाले मेयर र उपमेयर नै जितेको थियो । काँग्रेसले कलैया र धनगढीमा मेयर र उपमेयर, नेपालगञ्जमा उपमेयर जितेको थियो ।
२०७४ मा ललितपुर र विराटगरबाट काँग्रेसले मेयर र उपमेयर, वीरगञ्जमा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी, भरतपुरमा माओवादीले मेयर जितेको थियो । काठमाडौंबाट एमालेले मेयर र पोखरामा मेयर र उपमेयर दुवै जितेको थियो । काँग्रेसले वीरगञ्ज, भरतपुर र काठमाडौंमा उमपेयर जितेको थियो ।-reportersnepal.com